कांग्रेस सभापतिमा उठ्ने गगन थापाको घोषणा, पराजित भए राजिनामा दिने ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कांग्रेस सभापतिमा उठ्ने गगन थापाको घोषणा, पराजित भए राजिनामा दिने !
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने बताएका छन्। महामन्त्रीको स्वाभाविक उम्मेदवार आफू रहेकाले जोखिम मोलेर सभापतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बुधबार बिहान एक रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले कांग्रेसमा अहिले नयाँ समीकरण बनिरहेको खुलासा पनि गरे । ‘अहिलेकै पक्ष र विपक्षमा रहेको अवस्थालाई भत्काउने गरी समीकरण बनिरहेको छ, केही दिनपछि यसको रिजल्ट आउँछ,’ उनले भने।
उनले पार्टीमा परिवर्तनका लागि आफू सभापतिको जो’खिम उठाउन पनि तयार रहेको बताए । ‘यो महाधिवेशनमा म सभापति ल’ड्न पनि सक्छु । कसैलाई सघाउन पनि सक्छु,’ थापाले भने । अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दा आफूलाई उडाएको स्मरण गर्दै अहिले पनि सभापति लड्छु भन्दा सवैलाई त्यस्तै लाग्नु स्वाभाविक भएको पनि उनले बताए।
आफू पार्टी सभापति भएमा पार्टीका सबै संरचना फेर्ने उनले बताए । आमचुनावमा पार्टीले हार बेहोरेमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ।
‘पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पार्टी पराजित भए स्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ, यसले नयाँ नेतृत्व आउन मद्दत गर्छ, यदि मेरो नेतृत्वमा २०७९ को आमचुनावमा पार्टी पराजित भए सभापतिबाट म राजीनामा दिन्छु, यसले अर्को सक्षम नेतृत्व आउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।
सरिता गिरीको सांसद पद खोस्न सरकारलाई गुरुङको आग्रह, दिए राष्ट्रघातीको संज्ञा